1 PITA 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1PI 4)
Ma ndụ unu na-ebi ugbu a na-eju ndị enyi unu na-amaghị Chineke anya ebe ọ bụ na unu anaghị esokwa ha ebi ndụ ọjọọ ndị ahụ ọzọ. Nke a pụkwara ime ka ha were unu na-eme ihe ọchị ma ọ bụ ilelị unu anya.
Ma chetanụ nke ọma na ụbọchị na-abịa mgbe ha ga-eji ọnụ ha kwupụta ihe ha mere nꞌihu Chineke onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, taa ndị na-ebi ndụ ọjọọ ahụhụ.
Ka onye ọ bụla jiri onyinye pụrụ iche Chineke nyere ya na-enyere ndị ọzọ aka. Bụrụnụ ndị ji onyinye dị iche iche Chineke nyere unu na-achịzi ezinụlọ Kraịst nke ọma.
Ọ bụrụ na Chineke nyere gị onyinye izisa ozi ọma na-ezisa ya dị ka a ga-asị na Chineke si nꞌọnụ gị na-ekwu okwu. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-enyere ndị ọzọ aka, were ike ahụ nile Chineke nyere gị mee ya. Ka e site nꞌime ihe nile nye Chineke otuto site nꞌaha Jisọs Kraịst Onyenwe ike na otuto ruo mgbe nile ebighị ebi. Amin.
Ka onye ọ bụla nꞌime unu ghara ịta ahụhụ nꞌihi na o gburu mmadụ ma ọ bụ dị ka onye ohi, ma ọ bụ dị ka onye na-eme ihe ọjọọ, ma ọ bụ dị ka onye na-anara mmadụ ihe nꞌaka ike.
Ma ihere ekwesịghị ime unu mgbe unu na-ata ahụhụ dị ka ndị Kraịst. Kama nyenụ Chineke ekele na a na-akpọ unu ndị Kraịst.
Ọ̀ bụrụ na ọ ga-esi ike ịzọpụta ndị ezi omume, oleekwanụ olileanya dịrị ndị na-amaghị Chineke na ndị mmehie?
1 PITA 4:4
1 PITA 4:11
1 PITA 4:15
1 PITA 4:16
1 PITA 4:18